Shina mankany Canada-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Home>Serivisy serivisy>Iine Amerikanina Avaratra>Shina mankany Canada
Fandefasana entana avy any Shina mankany Canada
Ny ankamaroan'ny mpanjifantsika dia miorina any Canada, noho izany dia nanjary tsena lehibe ho antsika izy io. Nanao sonia ny tahan'ny fifanarahana izahay miaraka amin'ireo mpitatitra toy ny COSCO, OOCL, APL, EMC, MSK, ary HMM. Ireo fifandraisana ireo dia manome anao ireo vidin'ny entana tsara be izahay rehefa mandefa avy any Chine mankany amin'ny seranan-tsambo any Canada.
Miaraka amin'ny SHL amin'ny maha mpiara-miombon'antoka, ny entana fandefasana entana any Shina mankany Canada dia ho mora kokoa, ny handao ny entanao fotsiny no ilainao, ary ny ambiny no hataontsika sisa. Ny SHL dia mikendry ny ho lasa fandefasana entana tsara indrindra avy any Chine mankany Canada. Mangataha fomba fijery tsara kokoa izao.
Fandefasana entana Ro-Ro / Break entana avy any Chine ka hatrany Canada
Ny SHL dia afaka manome RORO ROROMAFI BREAKBULK ho an'ny fitaovana famepetra, fiara ary fitaovana mavesatra avy any Chine ho any Canada Afaka manome vahaolana iray mijanona sy namboarina isika.
Fandefasana entana an-dranomasina avy any Chine ka hatrany Canada
Azontsika atao ny manome ny vidin'ny fivezivezena an-dranomasina, ary ny vahaolana tsara indrindra, miorina amin'ny fotoana fandefasana anao rehefa mandefa avy any Shina mankany amin'ny seranan-tsambo any Canada (indrindra ny seranan-tsambo any anaty tanàna).
Fandefasana entana an'habakabaka avy any Shina mankany Canada
Izahay dia hisafidy ny fiaramanidina azo tanterahina indrindra ho an'ny fandefanao mifototra amin'ny fitakian'ny fotoana. Bansar no vahaolana tsara indrindra amin'ny fampandehanana entana amin'ny zotram-piaramanidina avy any Chine mankany Canada.
Fandefasana mora indrindra avy any Chine ka hatrany Canada
Miankina amin'ny hoe firy ny entana alefanao avy any Chine mankany Canada, raha tsy maika ianao miaraka amin'ny santionany kely dia azonao atao ny mampiasa ny China Post na maneho toy ny DHL, raha manana entana bebe kokoa ianao, dia ifandraisa amin'i Bansar, hahazo ny fandefasana tsara indrindra izahay. rate from China to Canada.
Ohatrinona ny entana / firy avy any Shina mankany Canada
Door to Door Shipping avy any Chine ka Kanada
Na amin'ny filan'ny tena manokana na orinasa, dia afaka manome serivisy amin'ny serivisy fanaterana varavarana ho anao izahay, izay ahitàna ny fangatahana fanao any Canada.
Ny fandefasana entana tsara indrindra avy any Chine ka hatrany Canada
Manomeza vidin'ny ranomasina sy haingam-pandeha an'habakabaka manomboka any Shina mankany Canada.
Avy any Seaport any Chine
Ho any Seaport any Canada
Seranam-piaramanidina lehibe any Canada
Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Lester B. Pearson Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Vancouver
Lutselk'e Airport Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Montréal / Pierre Elliott Trudeau
Seranam-piaramanidina Metropolitan Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Regina
Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Calgary Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Edmonton
Seranam-piaramanidina Club Bay Yacht Seranam-piaramanidina Billy Bishop Toronto City Center
Seranam-piaramanidina Goose Bay
Seranam-piaramanidina Sioux Lookout
Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Winnipeg / James Armstrong Richardson
Seranam-piaramanidina Prince George Seranam-piaramanidina Windsor
Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena John C. Munro Hamilton Seranam-piaramanidina Metropolitan
Seranam-piaramanidina Montréal (Mirabel) Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Halifax / Stanfield
Ahoana no fomba hahitako ny sandan'ny fanafarana entana ho an'ny vokatrao?
Ny tranokalan'ny CBP https://www.cbp.gov/ dia manana fampahalalana marobe momba ny fomba fanao sy adidy Canada.
Mba hahitanao ny habetsaky ny vidin'ny vokatrao dia mila mitady aloha ny kaody HS ianao.
Afaka manampy anao amin'izany ny mpampindram-panao mivarotra anao.
Avy eo hampiasa ity kaody ity ao amin'ny tahirin-kevitra momba ny tarehin-javatra nomena ianao mba hamaritana ny habetsaky ny nampidirina tamin'ny vokatrao.
Mila miantoka fiantohana ny entako any Chine ve aho?
Raha mandefa ny teny momba ny CIF ianao, dia tsy mila mandoa ny fiantohana.
Izany dia satria ny CIF dia manarona ny fandefasana fiantohana.
Izany no antony iantsoana azy hoe 'entana fiantohana vidiny.'
Raha betsaka ny CIF dia misy fiantohana ny entana, ny fehezin'io fiantohana io dia miovaova amin'ny orinasa fandefasana samihafa.
Ka, raha ohatra, avelanao ny mpamatsy anao hitantana ny fandefasana ny atiny, dia ho very ny fomba fifehezana ny fomba fidin'izy ireo.
Mety hanapa-kevitra izy ireo hisafidy ny fomba mora indrindra, izay, tsy hainao hifehy intsony.
Raha eo amin'ny lafiny azo antoka ianao, tsara indrindra raha mifandray amin'ny mpandefa entana any Shina ianao hahafantatra ny fonon'ny fiantohana.
Mila mandoa adidy sy hetra any Chine ve aho?
Tsy mila mandoa hetra any Sina ianao.
Ny fandaniana hoentinao dia ny vidin'ny fitaterana mankany amin'ny seranan-tsambo any China.
Ary koa, mila miantoka ny vidin'ny fanodinana any Sina ianao.
Marihina fa tafiditra ao daholo ireo fiampangana rehetra ireo ao amin'ny orinasa Shina.
Avy amin'ny FOB mankany amin'ny zavatra hafa rehetra. Ka tsy tokony hanahirana azy ireo akory ianao.
Raha tsy hoe mazava ho azy, ny loharanoo fotsiny no entinao amin'ny teny EXW.